Olee otú Ekekọrịta Android égwu na ndị ọzọ
> Resource> Android> Olee otú iji Ekekọrịta Android égwu na ndị ọzọ
Were ya na ị chọrọ ikere òkè ọtụtụ ga-nwere Android ngwa ọdịnala na gị ezinụlọ na ndị enyi, ihe ị ga-eme? Ọ bụrụ na ị ka na-enweghị ezi echiche, biko agụ nke a. Isiokwu a tumadi na-enye gị oké Android manager - Wondershare MobileGo for Android. Na ya aka, ị nwere ike ngwa ngwa ịkọrọ ngwa ọdịnala na gị Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba ka Facebook na Twitter. Ọzọkwa, ị nwere ike izipu a ozi ederede site na PC ịkọrọ Android ngwa.
Download a Android njikwa ka Android òkè ngwa.
Atụmatụ na usoro maka ekere òkè Android ngwa
Mgbe nbudata a Android manager - Wondershare MobileGo for Android, ị kwesịrị ị wụnye ya na gị PC. Agba ya iji bugote mpio njikọ dị ka screenshot-egosi n'okpuru.
Ebe a, anyị na-enye gị nkọwa ndị ọzọ banyere akwado Android ntị na mbadamba. Lelee ya
Nzọụkwụ 1. Jikọọ gị android ngwaọrụ PC site na eriri USB ma ọ bụ WiFi
MobileGo for Android-Enye gị ụzọ abụọ jikọọ gị Android ekwentị ma ọ bụ na tebụl ruo na PC. Otu bụ site na eriri USB, ndị ọzọ na-eji WiFi. Họrọ ọkacha mmasị gị njikọ ụzọ. Mgbe njikọ, gị Android ekwentị ma ọ bụ na tebụl ga-ozugbo achọpụtara na mgbe ahụ gosiri na isi window.
Nzọụkwụ 2. Share ngwa Android
Ugbu a, ka na-ekpe sidebar nke isi window. Pịa "égwu" na ị ga-ahụ ngwa window ke ziri ezi. Ebe a, ị nwere ike ịlele ngwa 'size, nwụnye oge, zọpụta ọnọdụ na ndị ọzọ. Tinye akà rà kwụsịrị ngwa na ị ga-amasị ịkọrọ ndị ọzọ. Mgbe ahụ, mee ka a nri click. Nke a ga-eme ka elu a adaala menu. Pịa "Share". Mgbe ahụ, ị ​​ga-esi 3 nhọrọ: "Share ka Facebook", "Share ka Twitter" na "Share site SMS".
Ịkọrọ Android ngwa Facebook ma ọ bụ Twitter, i kwesịrị abanye n'ime akaụntụ gị. Mgbe ahụ, ị ​​ga-ahụ na-eji ngwa nkekọrịta ọdịnaya. Ọ bụrụ na i bu n'obi ịkọrọ ngwa site SMS, pịa "Share site SMS". Mgbe ahụ, ị ​​ga-esi a mmapụta window. Pịa cross na-egosi na kọntaktị niile na gị android ngwaọrụ. Họrọ ndị mmadụ kọntaktị na ị na-aga ịkọrọ ngwa. Mgbe ahụ, pịa "OK". Mgbe ahụ, pịa "Send".
Cheta na: Wondershare MobileGo for Android nkwado nkekọrịta ngwa ọdịnala na ị download na arụnyere, ọ bụghị gụnyere usoro ngwa.
Nke ahụ bụ ihe niile banyere otú ịkọrọ Android ngwa. Ọ dị mfe na ngwa ngwa, ọ bụghị ya? N'ezie, iche site Android ngwa, a Android njikwa na-enye gị ike ịkwaga ngwa site na kaadị ebe nchekwa na ọnọdụ na gị gam akporo ngwaọrụ-enye ohere. Ọ bụrụ na ị rụnyere ọtụtụ ngwa, ị nwere ike iwepụ gị achọghị ndị ozugbo.
Gbalịa MobileGo for Android ịkọrọ ngwa ọdịnala na Android ngwaọrụ.
Otú e si etinye Music on Samsung Galaxy S5
Olee otú Naghachi Data si Samsung inye
Olee otú Naghachi ehichapụ Photos si LG marquee
Olee otú Naghachi Photos & Videos si LG Optimus
Android App Installer: Easy Wụnye / Export / Uninstall égwu ka Android si PC
Ụzọ dị mfe iji Naghachi ehichapụ ozi na Android ekwentị mkpanaaka na